Sir la helay dagaalamayaasha Al-shabaab oo hub kala soo dagay Dekad macmal ah. – Hornafrik Media Network
Hornafrik-Ilo xog ogaal ah ayaa waxa ay xaqiijiyeen in Xarakada Al Shabaab saanad Militari ay kala soo dageen Dakadda macmalka deegaanka Faax oo ka tirsan Degmada Xarardheere ee Gobolka Mudug.
Saanada Militari ayaa la sheegay in la geeyay deegaano ka tirsan Gobolka Galgaduud, waxaana sida qorshaha uu yahay la doonayaa in loo qaybiyo ciidamada jabhadaha Al Shabaab ee ku sugan Gobolada Mudug, Galgaduud iyo Shabellaha dhexe si ay dagaalo ugu qaadaan.
Inta badan hubka ay ku dagaalamaan Ururka Al Shabaab ayaa la sheegayaa inuu uga yimaado dhanka dalka Yemen, halkaasi oo ay ka dagaalamaan Xoogag ka tirsan Ururka Al-Qaceda oo Shabaab ay ka mid yihiin.
Sidoo kale Shabaab ayaa hub ka hela xeryaha ciidamada Amisom ee weerarada ay ku qaadaan iyo Saldhigyada ciidamada dowladda ee ay weeraraan.